Bartlett hanatrika ny fivorian'ny fivorian'ny filankevitry ny Firenena mikambana momba ny fizahantany faha-110 an'ny Firenena Mikambana
Home » Travel Associations News » Bartlett hanatrika ny fivorian'ny fivorian'ny filankevitry ny Firenena mikambana momba ny fizahantany faha-110 an'ny Firenena Mikambana
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett dia vonona handray anjara amin'ny Fivorian'ny Filan-kevitry ny Executive United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) 110th, mandritra ny 16 - 18 Jona 2019 ao Baku, Azerbaijan.
Ny minisitra Bartlett sy ny delegasiona dia hampiasa ihany koa ny fotoana hanombohana fifanakalozan-kevitra amin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Andriamatoa Zurab Pololikashvili, momba ny fivorian'ny CAM 2020 ary koa ny Fihaonambe manerantany momba ny fanavaozana, ny faharetana ary ny fitantanana ny krizy 2020, izay hiarahan'i Jamaika hiaraka amin'ny UNWTO.
“Manantena ny hampiantrano ny fihaonana an-tampon'ny Global Tour Innovation Resilience sy Crisis Management Summit voalohany indrindra any Montego Bay izahay. Hampiantrano ny fivorian'ny Amerika any 2020 ihany koa i Jamaika. Ity ezaka miverina ity dia hametraka an'i Jamaika, tsy ho toy ny ivon-toerana manerantany momba ny fanavaozana, ny faharetana ary ny fitantanana ny krizy fa koa ifantohan'ny Amerika manontolo amin'ny resaka dinika ataon'ny CAM, "hoy ny minisitra.
Ho fanampin'ny fandaharam-potoanan'ny Session 110th, ny UNWTO dia handray valan-dresaka manokana mitondra ny lohateny hoe "Arovy ny lova-tanindrazana: ny fitandroana ny tontolo iainana, ny kolontsaina ary ny tontolo iainana" ny 17 jona 2019. Izany dia mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana lehibe indrindra ataon'ny UNWTO ary indrindra natokana ho an'ny Minisitry ny Governemanta, izay hanana fotoana hanehoana ny heviny sy hikaroka vahaolana iraisana.
Ny minisitra Bartlett dia miaraka amin'i Ramatoa Jennifer Griffith, sekretera maharitra ary Miss Gillian Baldeo, talen'ny serasera, fampandrosoana ny vokatra. Hiverina any Jamaika izy ireo amin'ny 20 Jona 2019.
Tapaka i Soisa: vehivavy an-jatony an'arivony no manao fitokonana manerana ny firenena
Ny Panda Xiang Xiang dia manambatra ny renivohitra Japoney sy ny tanàna sinoa mba hampiroboroboana ny fizahantany